Grilled Salmon Experience at The Manhattan Fish Market 1229 views
ဟိုတစ်လောက Manhattan Fish Market ရဲ့ Facebook Page မှာ ဟင်းလျာအသစ်သုံးမျိုးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ ဓာတ်ပုံသတင်းလေး ဖတ်လိုက်မိတယ်.. Manhattan ဆိုရင် စိတ်ဝင်စားစမြဲမို့ အမှတ်ထင်ထင်ရှိလိုက်တယ်.. ပိုလို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက Menuအသစ်သုံးမျိုးလုံးကို “Salmon” ငါးနဲ့ အဓိက ချက်ပြုတ်ထားတယ်ဆိုတာပါပဲ.. “Salmon”ရဲ့ ကောင်းခြင်းအဖြာဖြာကို သူငယ်ချင်းတို့လည်း သိပြီးဖြစ်မှာပါ.. Omega3ကြောင့် ရရှိလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူးတွေကို အကျယ်တဝင့်ဖော်ပြပေးထားလို့ ဗဟုသုတရယုံမက သွားစားချင်စိတ်ကို နှိုးဆွနေပါတယ်.. ဒါ့အပြင် အစားအစာတွေအတွက် Limited Time ရှိတယ်လို့ ဆိုတာကြောင့် လက်နှေးမနေဘဲ အမြန်သွားစားခဲ့ပုံလေးကို ခုMyLannပရိတ်သတ်ကြီးထံ ဖောက်သည်ချလိုက်ပါတယ်နော်.. :D
ဆိုင်ထဲကို ဝင်ဝင်ချင်းပဲ ဆိုင်ဝန်ထမ်းကောင်လေးမှ ဖော်ရွေပျူငှာစွာကြိုဆိုပါတယ်.. ကျွန်မကို နေရောင်လင်းလင်းထင်းထင်းရှိတဲ့ ခုံလေးမှာ နေရာချပေးပါတယ်… Menu မှာ ကျွန်မ မြည်းစမ်းချင်တဲ့ “Salmon” ဟင်းလျာသုံးမျိုးကို တွေ့ပါပြီ.. “Salmon Burger” ရယ်.. “Grilled Salmon” ရယ်.. “Salmon’ n Chips” ရယ်.. သုံးခုလုံး စားချင်စရာကောင်းလိုက်တာ.. ရွေးရခက်ကြီးဖြစ်နေလို့ အချိန်ယူလိုက်ရသေးတယ်.. နောက်ဆုံးမှာတော့ “Salmon” ငါးရဲ့ ထိထိမိမိအရသာကို သုံးဆောင်ချင်တဲ့အတွက် “Grilled Salmon” ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်..
Grilled လုပ်ထားတဲ့ Salmon ငါး အသားတုံးလှလှလေးရယ်.. ကျန်းမာရေးအတွက် ပန်းပွင့်စိမ်းနဲ့ မုန်လာဥနီချိုချိုလေးရယ်.. တွဲဖက်စားသုံးရမယ့် Mashed Potato ရယ်.. ပြီးတော့ Black Pepper Sauce လေးတစ်ခွက်ရယ်.. hmm !! အရသာမြည်းကြည့်ချင်တဲ့စိတ်ကို မနည်းထိမ်းပြီး MyLann ရဲ့သူငယ်ချင်းတို့ကို ကြွားရအောင် ဓာတ်ပုံအရင်ရိုက်လိုက်ပါသေးတယ်.. :P ဟုတ်ကဲ့ !! ခုတော့ မြည်းယုံတင်မဟုတ် အားရပါးရစားပါပြီ.. Mashed Potato ကို သူတုိ့ညွန်းဆိုတာက “Ultra Smooth Mashed Potato” ပါတဲ့.. အဲ့ဒါဆိုရင် ကျွန်မကလည်း ပြောချင်ပါတယ်.. “Ultra Ultra Smooth” ပါလို့.. ပါးစပ်ထဲမှာ ပျော့အိနူးညံ့ပြီး မှုန်မှုန်ညက်ညက်လေးဖြစ်နေလောက်တဲ့အထိ “Smooth” ဖြစ်နေတဲ့ အာလူးထောင်းလေးပါ.. အပြောမဟုတ်၊ အလုပ်နဲ့သက်သေပြတဲ့ သဘောပေါ့ရှင်.. ဒီလိုနဲ့ “Salmon” ပူပူနွေးနွေးလေးပေါ် Black Pepper Sauce လေးစမ်းရင်း မွှေးပျံ့လာတဲ့ရနံ့လေးကို နှစ်သက်စွာခံစားနေမိပါတယ်.. “Salmon” ငါးတုံးလေးက မပျော့မမာနဲ့ အနေတော်ဖြစ်နေပြီး တစ်ခါဖဲ့လိုက်တိုင်း အသားလေးတွေက အလွှာလိုက်လေးပဲ့ပါလာတယ်.. အသားက ခပ်တင်းတင်းလေးနဲ့ စားတဲ့အခါနူးညံ့သလို အရသာကတော့ ငါးရဲ့အရသာသက်သက်ပဲ ရရှိပါတယ်.. “Salmon” အရသာကို ထိထိမိမိခံစားကြည့်ချင်တဲ့ ကျွန်မအတွက်တော့ တကယ်ကိုကွက်တိပါပဲ.. Black Pepper Sauce နဲ့တွဲဖက်စားသုံးတဲ့အခါမှာတော့ အနံ့ရော အရသာပါ ပိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ ငါးကင်တစ်ပွဲကို သုံးဆောင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်.. ကျွန်မကိုယ်၌က “ငရုတ်ကောင်း”ကိုအရမ်းကြိုက်တော့ ဒီဆော့စ်ရဲ့ထူးခြားတဲ့အရသာကိုလည်း တကယ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်မိပါတယ်.. ပန်းပွင့်စိမ်း နဲ့ မုန်လာဥနီရဲ့ လတ်ဆတ်တဲ့အရသာကလည်း “Grilled Salmon” ကို အပြည့်အဝ ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်.. ဗိုက်မှပြည့်ပါ့မလားလို့ စိတ်ပူမိပေမယ့် တကယ်တမ်းတော့ မနည်းကုန်အောင်စားခဲ့ရပါတယ်.. စားနေရင်းနဲ့ တစ်ဝက်လောက်ရောက်တော့ ဆိုင်ဝန်ထမ်းမိန်းကလေးမှ အအီပြေစေရန်ဆိုပြီး အချဉ်တစ်ပန်းကန်လာပေးပါတယ်.. စားသုံးသူကို ဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်နေတာ သိသာလှပါတယ်.. ဆိုင်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ အမြင်ဆန်းအောင် ပြင်ဆင်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်.. Seafood ကိုသာ အဓိကထားရောင်းတယ်ဆိုတာ သိသာစေတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ ဓာတ်ပုံငယ်လေးများကိုလည်း နံရံမှာချိတ်ဆွဲထားပါတယ်.. ဆိုင်အပြင်အဆင်ကြောင့် လူရောစိတ်ပါ သက်သောင့်သက်သာရှိလှပါတယ်.. ကျွန်မရဲ့ လှပတဲ့နေ့လည်စာ “Grilled Salmon” ကို ကျွန်မသဘောကျတဲ့ ဆိုင်အပြင်အဆင်၊ အငွေ့အသက်တို့ကြားမှာ မြိန်ရေယှက်ရေ သုံးဆောင်ခဲ့ပါတယ်.. MyLannချစ်သူတို့လည်း ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာ၊ လတ်ဆတ်သန့်ရှင်းတဲ့အစားအစာ၊ အရသာပြည့်ဝတဲ့အစားအစာများကို စားသောက်ရင်း နေ့သစ်တွေတစ်ရက်ပြီးတစ်ရက်ကို ကောင်းမွန်စွာဖြတ်ကျော်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်..
Pop Corn (MyLann Foodie)
Recently, on The MANHATTAN FISH Market Facebook page, I sawapost introducing three new dishes... Since I'mafan of MFM, I read the post... Interesting thing is all three dishes are made with Salmon fish... All of you might have already known the benefits of eating Salmon, such as rich amount of Omega 3... I was already keen to try those new dishes... Moreover, those dishes will be available foralimited amount of time, so here I am at MFM and going to share my dining experience with one of the three new menu items...
As soon as I entered the shop, every staff in the shop warmly welcomed me... They seated me ataspot where there was ample sun light, and underneath the brightness, I saw those three new dishes advertised on their Facebook page... Oh my god, all three - "Salmon Burger", "Grilled Salmon", "Salmon 'n Chips" - looked succulent making me hard to decide which one to choose for my lunch... In the end, I chose "Grilled Salmon" since I would like to try the taste of Salmon fish to its fullest...
"Grilled Salmon" arrived, with an attractive piece of grilled salmon, healthy and fresh broccoli, red and sweet-looking carrot bits, delicious-looking mashed potatoes, andasmall cup of black pepper sauce, all nicely decorated onarobust plate printed with MFM logo and motto... Hmmm, I had to restrain myself from trying it right away, because I amaMyLann foodie who needs to take pictures before I eat!!! (for all MyLann friends here) They told me that the mashed potato is called "Ultra Smooth Mashed Potato"... "Ultra Smooth"? Let me try it first!! Yes, the experience of trying it convinced me that the name fits... Then, I slowly poured black pepper sauce onto the pink grilled salmon, enjoying the nice fragrance coming out... The salmon was grilled at the right temperature and hadanice texture, not too soft not too hard, so salmon pieces fell apart easily with the spoon... The salmon's taste was quite natural withalight touch of black pepper sauce, and I really enjoyed it... The experience of "Grilled Salmon" was further enhanced with fresh broccoli and carrots...
At the beginning when the dish arrived, I thought it wouldn't be enough for lunch... But, in reality, it was quite filling without making me feel extremely stuffed... In the middle of the meal, the staff was always keen and asked me if everything was okay and if I needed any extra sauce, etc... Seafood is MFM's specialty, andagood amount of interesting seafood-related pictures hanging at the walls proved it... MFM's neat and tidy decoration and customer service made my dining experience even more complete... It was suchadelicious and healthy meal of "Grilled Salmon" atalovely afternoon... :)